एक, दुई, तीन नेपाल टुक्रिन्छ, मधेस छुट्टै देश हुन्छ :अभिषेक प्रताप साह
जब जनताले शान्तिपूर्ण रुपमा अधिकार माग्दा पाउँदैनन्, तब मुलुक टुक्रिएका उदाहरण विश्वमा धेरै छन् ।
५ पौष, २०७४ || प्रकाशित ११:२२:५७
जनकपुरधाम, ५ पुस ।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमका युवा नेता तथा सांसद अभिषेकप्रताप साह सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत मुलुक टुक्र्याउने अभिव्यक्ति दिएपछि विवादमा छन् । उनकै पार्टीले समेत साहको अभिव्यक्तिलाई दुर्भाग्यपूर्ण भनेको छ ।
तर, साह आफ्नो अभिव्यक्तिमा अडिग रहेको बताउँछन् । साहले अधिकार माग्दा मधेसी जनतालाई अपमानित र तिरस्कृत गरिएकाले नेपालभित्र मधेस बस्न नसक्ने जिकिर गर्छन् । साहले नेपाल टुक्रिने ठोकुवा गर्दै त्यसको दोष एमालेलाई लगाए ।
भारतीय सीमाको दसगजासम्म नेपाल मान्ने तर, चुरेभन्दा तलको भूभागमा बस्नेहरु भारतीय र विखण्डनकारी भन्ने एमालेको सोचका कारण मुलुक टुक्रने अवस्था आएको दाबी उनको छ । साहसँग यिनै विषयमा कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ उनीसँगको कुराकानीको सम्पादित अंशः–
तपाईंजस्तो जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले खुलेआम मधेसलाई नेपालबाट अलग गर्ने धम्कीपूर्ण र विवादित फेसबुक स्टाटस पोस्ष्ट गर्न मिल्थ्यो ?
मैले कुनै विवादित र धम्कीपूर्ण कुरा गरेको होइन । कसैलाई धम्की लागेको होला । तर, यो सत्य कुरा हो । केही मानिसको आँखाबाट हेर्दा मेरो कुरा विवादित लागेको हुनसक्छ । मैले मधेसी जनताको भावना बोलेको हुँ ।
यो तपाईंको आवेगको वा सुझबुझपूर्ण अभिव्यक्ति हो ?
मैले एकपटक, दुईपटक होइन, सयौंपटक सोचेर बोलेका कुरा हो । हामीले समग्र नेपालभित्रै बसेर अधिकार लिन खोज्दा तिरस्कृत गरियो । मधेसीहरु नेपाली होइनन भनियो । तिरस्कारको पनि हद हुन्छ नि । मधेस आन्दोलनमा अहिलेसम्म ३ सय मानिस मरिसके । यत्तिका वर्षसम्म आन्दोलन चलिरहेको छ । तर, नक्कली राष्ट्रवादी र नक्कली राष्ट्रवादीहरुले हामीलाई अधिकार दिने कुरा त के झन् तिरस्कृत गर्ने, घृणा गर्ने काम गरिरहे । अब मधेसी जनताको धैर्यताको बाँध टुट्न लागिसक्यो । लगातारको तिस्कार सहनुभन्दा अर्कै बाटो रोज्नु ठीक भन्ने मेरो भनाइ हो ।
कसले तिरस्कृत गरेको छ र ? मधेसको समस्या समाधान गर्न भनेर दलहरु र सरकार प्रयासरत रहेकै छन् होइन र ?
एमालेले मधेसीलाई तिरस्कृत गरेको छ । एमालेबिना संविधान संशोधन हुँदैन । ऊ हामी मधेसीलाई नेपाली नै मान्न तयार छैन । एमालेले १० गजासम्म नेपाल हो, तर चुरेभन्दा तल बस्ने कालो छाला भएकाहरु नेपाली होइनन् भन्ने कुरालाई सिद्धान्त नै बनाइसक्यो । उसका नेताहरुका पटकपटकका अभिव्यक्तिमा त्यही कुरा आइरहेको छ । हामीलाई उत्तर प्रदेश र बिहारबाट आएको भन्ने ? हामीलाई सधैं भारतका दलाल र विखण्डनकारी भन्ने ? म पनि जनताबाट चुनिएर आएको प्रतिनिधि हुँ । मलाई नेपाली हो कि होइन भनेर डिएनए टेस्ट केपी ओलीले गर्ने ?
कुनै अमुक पार्टीको रिसले देशै टुक्रयाउने कुरा गर्नुभन्दा राजनीतिक रुपमै उसलाई पराजित गर्ने बाटाहरु पनि त छन् नि ?
जब जनताले शान्तिपूर्ण रुपमा अधिकार माग्दा पाउँदैनन्, तब मुलुक टुक्रिएका उदाहरण विश्वमा धेरै छन् । एमाले उग्रराष्ट्रवादी शक्ति हो । उसले हरुको भावनाको सम्मान होइन, अपमान मात्र गर्न जानेको छ । उसको नक्कली राष्ट्रवाद एक दिन छताछुल्ल हुन्छ । एमालेका धेरै नेता र केपी ओलीले कसको छहारीमा राजनीतिमा टिके र कसरी शक्ति आर्जन गरे भन्ने मैले बताउँनै पर्दैन ।
त्यस्ता व्यक्तिहरुले हाम्रो राष्ट्रियताको डिएनए टेस्ट गर्न सुहाउने कुरा हो ? एमालेको उग्र राष्ट्रवादले मुलुकलाई अखण्डित राख्न मद्धत गर्दैन । जब देशलाई सबै जात, भाषा, क्षेत्र र बर्णका जनता चाहिँदैन भने हामीलाई पनि यो देश चाहिँदैन । एउटै देशमा बस्ने हो भने हामीलाई बराबरीको अधिकार र सम्मान चाहियो । कुरा स्पष्ट छ, नत्र बस्न सकिँदैन । एमालेकै कारण देश टुक्रँदैछ । मधेसी नेपाली होइन, मधेसी यो देशका नागरिक होइन, तिनलाई अधिकार दिनुहुँदैन । कुनै तह र तप्कामा पुग्न दिनु हुँदेन भन्ने एमालेको सोचकै कारण नेपाल अब अखण्ड रहन सक्दैन ।
तपाईको विखण्डनकारी अभिव्यक्तिप्रति तपाईंकै पार्टीले आपत्ति जनाएको छ नि थाहा छ ?
मैले पार्टी को होइन, मधेसी जनताको आधिकारिक धारणा राखेको हो । पार्टीमा लागेको भन्दैमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हुँदैन र ? म पार्टीको मान्छे मात्र नभएर जनताबाट प्रत्यक्ष चुनिएको सांसद हुँ । मलाई जनताले आफ्ना मुद्धाका लागि संघर्ष गर्न जिताएर पठाएका हुन् । म पार्टीलाई धोका दिन सक्छु, तर मतदातालाई धोका दिन सक्दिन ।
पार्टीले तपाईंलाई अब यस्तै अभिव्यक्ति दिन नछाडे कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ रे नि ?
पार्टीले कारबाही गरोस् । मलाई त्यसमा भन्नु केही छैन । तर, म मेरो दृष्टिकोण र एजेण्डामा स्पष्ट छु । जनताले मलाई जेका लागि मत दिएका थिए त्यो कुरा गर्छु÷बोल्छु । पार्टीभन्दा मेरो लागि मधेस र मधेसी जनता ठूलो हो । जबसम्म पार्टीले मधेस र मधेसीको मुद्धा बोक्छ तबसम्म पार्टीमा रहन्छु । जब मुद्दा छोड्छ पार्टीमा बस्नुको के औचित्य हुन्छ र ?
तपाईंलाई जनताले देश टुक्र्याउनका लागि मत दिएको हो ?
म पनि पहिला विखण्डनको पक्षमा थिइन । जहिले पनि विखण्डनको विपक्षमा उभिँदै आएको छु । तर, यत्तिका मानिस मरिसके, अझै मुद्धाहरुको राजनीतिक सम्बोधन गर्नुको साटो उल्टै अपमानित र तिरस्कृत गर्न थालिन्छ भने नेपालबाट मधेस अलग्गिएकै राम्रो । मेरो फेसबुक स्टाटस पोस्ट भएपछि मधेसी युवाहरुमा खुसीयाली छाएको छ । सयौं सन्देशहरु आइरहेका छन् । कसैले फोनमा, कसैले फेसबुकमा र कसैले मोबाइलमा म्यासेज गरेर ‘तपाईं अघि बढ्नुस, हामी साथमा छौं भनेका छन् । देश विदेश सबैतिरबाट मेरो समर्थन भएको छ ।
देश विखण्डन गर्ने कामको नेतृत्व कसले गर्ने, तपाईं कि सिके राउतले ?
सिके वा मैले होइन, मधेसी युवाले गरिहेका छन् । मेरै स्टाटस हेर्नुस् न । त्यसमा पहाडेले विरोध गरेका छन् । मधेसी सबैले समर्थन गरेका छन् । मधेसी युवाले अघि बढ्नुस भनेका छन् । रुची देखाइरहेका छन् ।
सरकारले तपाईंहरुको माग सम्बोधनका लागि संविधान संशोधनको तयारी गरिरहेका बेला यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण विचारको वकलात किन गर्नुभएको ?
सरकारसँग वा सरकारको नेतृत्वसँग मेरो गुनासो होइन । मेरो आपत्ति एमालेसँग हो । संसदको गणित नै त्यस्तै छ कि एमाले समहत नहुँदासम्म संविधान संशोधन हुँदैन । लेखेर राख्नुस् एक, दुई, तीन मधेस नेपालमा अब रहँदैन । मधेस छुट्टै राज्य बन्छ ।
सांसद जस्तो गरिमामय र जिम्मेवार पदमा बसेको मानिसले आफ्नो मातृभूमि र राष्ट्रिय अखण्डतालाई बलात्कार गर्ने प्रकारको अभिव्यक्ति दिन सुहाउँछ ?
किन सुहाउँदैन ? मधेसीलाई भारतीय दलाल भन्न सुहाउने ? मधेसीहरु नेपाली होइनन्, बिहारी हुन भन्न सुहाउने ? मधेसीको राष्ट्रभक्तिमाथि प्रश्न उठाएर बारम्बार तिरस्कृत गर्न सुहाउँने ? अनि हामीले सबैविकल्प बन्द भएपछि आफ्नो भूमिमा आफ्नै अधिकार कायम गछौं भन्न नसुहाउँने ?